Ingakanani i-4-DHEA iguqulwa kwi testosterone? | AASraw
Ingakanani i-4-DHEA ifumana i-Testosterone?
/Blog/4-DHEA , Ithala/Ingakanani i-4-DHEA ifumana i-Testosterone?
ezaposwa ngomhla 06 / 30 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo 4-DHEA, Ithala.
Yonke into malunga ne-4-DHEA
2.I-4-DHEA isebenza njani
4.Iziphi i-4-DHEA inzuzo?
5. Ngaba i-4-DHEA i-Anabolic Steroids
6.Usebenzisa njani i-4-DHEA?
7. Indlela yokubambisa i-4-DHEA nemiphumo emibi
8.Kunjani i4-DHEA iguqulwa kwi testosterone
9.Yintoni i-Difference phakathi kwe-DHEA ne-4-DHEA
10.I-5 Prohormones edume kakhulu
4-DHEA powder ividiyo
I.4-DHEA powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: 4-DHEA powder
I-molecular Formula: C19H28O2
Isisindo somzimba: 288.42
1. Yintoni i-4-DHEA?
4-DHEA powder, I-CAS 571-44-8, eyaziwa nangokuthi i-4-androstene-3b-ol, i-17-enye, i- 3β-Hydroxy-4-androsten-17-enye, i- 3β-hydroxyandrost-4-en-17-enye, i-3β-hydroxy -D4-androsten-17-enye, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-enye, 3β-hydroxy-etioallocholan-4-en-17-enye. I-4-Dehydroepiandrosterone (i-4-DHEA) yi-steroid engummangaliso we-5-dehydroepiandrosterone.
I-4-DHEA i powder yinto engokwemvelo engekho i-methylated (engekho i-17AA) ye-PRO-steroid. Nangona i-4-DHEA ingenza i-estrogen ingabonakaliyo mhlawumbi ayaneleyo ukuba ibangele i-side effects effects e-estrogen. Iziphumo ezipheleleyo ziya kufana okanye i-4-AD yangaphambili ivinjelwe kwi-2004. Izilingo eziphezulu zale khodi ziza kuvelisa ngokuzuzekileyo okuzuzisayo kwimizimba ye-muscle, ngokuphucula ngokulinganisela ngamandla. Le mveliso inokuvelisa i-bloat ukuguqulwa kwe-estrogen, enokuthi ibaleke ngokulawula i-aromatase inhibitor, kodwa oku kuya kunqumla injongo yokusebenzisa eli qela ukuqala.
igama 4-DHEA, 4-Andro, 4-AD
I-Molecular Formula C19H28O2
Isisindo somzimba 288.42
ukugcinwa Temp Ukushisa kwamagumbi
Ixesha lokuzisa kwiiyure ze-12 emva kokuhlawula
Uhlobo lokuhlawula WU, MG, BT, TT
ipakethe isikhwama sefestile okanye ukwenza ngokwezifiso
inkcazelo I-4-DHEA yendalo ngokwemvelo engeyiyo-methylated (engekho i-17aa) pro-steroid. I-4-DHEA, njenge-DHEA, idinga inkqubo ye-2 yokuguquka kwenkqubo ebandakanya i-3b-HSD kunye ne-17b-HSD ukuyiguqulela i-Androstenedione / androstenediol, kunye ne-testosterone. Yintoni eyenza i-4-DHEA eyahluke kakhulu kwi-DHEA ibhondi ephindwe kabini kwisithuba se-4th kunokuba i-5th. Oku kwenza i-4-DHEA ingaphantsi kwe-estrogen ngokungahambelani ngqo kwi-estrogen receptor efana ne-DHEA ifumaneka ukwenza.
Ekubeni eli qulunqa lenzeke ngokwemvelo kwaye i-side effects effects side effects will be fairly mild. Nangona kunjalo, amanani aphezulu angakhokelela kwesikhumba esinamafutha, i-acne kunye nokunyuka kwengcinezelo yegazi. Ngenxa yokuba le steroid ayikho i-17AA kufuneka ibe neenkxalabo ezincinci malunga negalelo elichaphazelekayo le-HDL / LDL. Ngenxa yokuba eli candelo liyakwazi ukuguqula kwi-testosterone lingaguqulela kwi-DHT kunye nezinye i-metabolite ze-5A. Le nto inokusebenza njengentonga efanelekileyo kunye neprogesational or non-androgenic compounds ezingabangela iingxaki nge-libido okanye gyno ngenxa yokungabi namandla okwenziwe nge-androgenic.
2. I-4-DHEA isebenza njani?
Emva kokugqitywa, i-4-DHEA (4-Andro) ingena kwigazi lakho kwaye iguqulwa ibe yi-testosterone. Isiqulatho siza kuqala ukuba neendlela ezibonakalayo eziphezulu ze-anabolic, ezibangelwa ubukhulu kunye namandla kunyuke ngelixa ukuphucula i-sex yakho drive-kukunika loo nto "engafanelekanga ye-Alpha Male Ecstasy."
3. Ngaba i-4-DHEA (571-44-8) i Prohormone?
Yintoni i Prohormone? Prohormones isisombululo esinokufikeleleka kwimiphumo ephezulu yehomoni. Iprohormones yimixube ethathwa ngomlomo. Iprohormone ithetha ukuba izenzo zakhiweyo ziyi-precursor yehomoni. Ngokwabo, abaphumelelanga. Umsebenzi wabo ukujikeleza ngegazi. Xa iprohormone iguqulelwe kwihomoni, ilawula ama-hormone. Cinga ngeprohormone ngokuba yiprothini eprotheyini eguqulela kwiprotheni ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo kunye nempilo ye-muscle.
I-4-DHEA iyiprohormone, kwaye icacile, i-4-DHEA ayiyona prohormone kuba idinga ukuguqulwa ezimbini ukuba ibe nguTestosterone. Ngoko, cinga nge-4-DHEA njengengaphezulu ye "pro-pro-hormone".
4-DHEA (4-Andro), iprohormone evumela abasebenzisi ukuba bazuze kwi-DHEA ngaphandle kwemiphumo emibi ye-esrogenic overload. I-4-DHEA i-DHEA yendalo ngokwemvelo. I-DHEA, okanye i-dehydroepiandrosterone, i-hormone eveliswa yi-adrenal gland.
I-adrenal gland yintsimbi ephezulu kwiimpso. Ngulo mveliso oyintloko weeHommoni ezibalulekileyo emzimbeni wakho okunceda ukulawula i-hormone yakho yesini kunye ne-cortisol. Ufuna ezi hormone zempilo enhle kunye nokuphila. Enye yeeyimoni ezibalulekileyo eziveliswa yi-adrenal gland iyona-adrenaline. Ukulwa kwakho okanye ukuphenduleka kwendiza kwiimeko ezixinzelelekileyo zivela kula ma hormone amahle kwizintso zakho.
I-hormone i-DHEA eveliswa yi-grenal adrenal, kodwa ingqondo iyenza nayo. I-DHEA ivumela imveliso ye-androgens kunye ne-estrogen, enenzuzo enqwenelekayo yilabo abafuna ukwandisa ubungakanani bemisipha kunye nempilo ye-muscle. Njengoko umzimba udala, ukuveliswa kweDHEA emzimbeni kunciphisa. Ukunciphisa i-DHEA emzimbeni kubangela ukukhathazeka kwe-hormonal, umsebenzi ophantsi wezesondo kunye ne-osteoporosis.
I-4-DHEA iyiprohormone eyenza umsebenzi onobuchopho kwaye inokubuyisela amanqanaba e-DHEA emzimbeni. Ihlala ingasebenzi kuze kubekho iinkqubo ezibangelwa ngexesha elifanelekileyo.
4. Ziziphi iinzuzo ze-4-DHEA?
I-4-Androsterone ijolise ukuphuhliswa kweengxube ze-muscle ngokuthe ngqo, malunga neeplani ze-8-12 zobunzima bomzimba ngaphakathi kwe-4 ukuya kwii-6 iiveki zokuqhuba iprohormone. Qaphela ukuba esi siphumo siya kubonakala ngokutya okufanelekileyo kunye nokufunda.
Ukwengeza, I-4-DHEA inzuzo lindele ukuba kwezi ziphumo:
-Imandla yamandla kunye namandla
-Ukuvuselela imvakalelo yakho
-Ixesha lokubuyisela ngokukhawuleza
Ngexesha elifanelekileyo lokutya, uza kuqaphela ukuba uphinde usebenze ngokusebenza ngokukhawuleza ngoko wenzayo xa ujikelezayo.
Uza kuqaphela ukulungiswa okunamandla kunye neengqungquthela ezinamandla. Uya kuphawula ukuba uya kuba namandla amaninzi embhedeni.
-Non-methylated, ukuze isibindi sakho singasindiswa
Kakade ke, iinqununu ezimbini ze-4-DHEA (571-44-8) zinokuphucula amandla kunye nokukhula kwemisipha. Yiyo le nto ukhangeleyo ukudala i-physique elite.Izibonelelo eziphezulu ze-4-DHEA ziza kuba luncedo ekubuyiseni, kuba ngoko unokusebenza ngokuphindaphindiweyo kwaye uzuze ngokukhawuleza.
5. Ngaba i-4-DHEA i-Anabolic Steroids?
Ngokwenene, ewe. Kodwa umahluko phakathi kwe-steroids rhoqo kunye ne-4-andro yenza kubekwe ngokomthetho e-United States. Isizathu sokuba yi-4-DHEA, igama elilodwa le-4-andro, linomlinganiselo owenziwe ngumzimba wethu ngokwemvelo.
I-DHEA imela - zama uzenzele enye ngaphandle-dehydroepiandrosterone, enye yezona zinto zijikeleza kakhulu kwi-body body.
Inkqubo yokuguqulwa kwe-enzyme, i-4-andro isongezelelo ibe yi-steroids yendabuko sele idlulile kwisibindi.
Emva koko ungena kwigazi njenge testosterone epheleleyo, eyenziwa ngumzimba wakho njenge testosterone eyenziwe ngokwemvelo. Nangona kunjalo akuyi kubhubhisa isibindi sakho, okwenza kubekho ukhuseleko.
6. Indlela yokusebenzisa i-4-DHEA?
Kubaqalayo, kufuneka ube ne dose 4-DHEA (I-4-DHEA isilinganiso) kwiiveki ze-4-6, phakathi kwe-300-500 mg imihla ngemihla.
Kubafundi abaphakathi okanye abahamba phambili okanye abaphathi be-powerlifters, unako ukuya kwii-6-8 iiveki uze uhambe ne-300-750 mg 4-DHEA isilinganiso ngosuku.
Ezi zifanele zilandelwe ngokungqongqo, kuba i-4-andro yiprohormone engayi kuhlanjululwa nayo. Qiniseka ukuba unamathela kwi-regimen eqinile, kubandakanywa ixesha kunye nebhayisikili.
Ngalolu xeshanye, kufuneka ulindele ukufumana iiplani ze-8-10 zokukhula kwemisipha.
Indlela eyona ndlela kukukwahlula idosi yakho yansuku zonke, inxalenye enye kwi-AM kunye nomnye kwi-PM.
Okanye, ngenxa yeziphumo eziphambili, uthatha isigamu sesongezelelo sakho ngeyure ngaphambi kokuba usebenze kwaye ulungile ngaphambi kokulala. Oku kuqinisekisa ukukhula kancinci, ukunyuka kwamandla kunye nokubuyiselwa.
7. Indlela yokubambisa i-4-DHEA nemiphumo emibi?
I-4-DHEA (4-Andro) ineziphumo ezincinci kwiziphumo / iziphumo ze-4-DHEA. Unokuhlangabezana nokuguqulwa kwe-estrogen encinci, iincampu ze-muscle, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ulwaphulo kunye nakwezinye iimeko ze-gynecomastia (gyno).
I-estrogen blocker iyimfuneko ukunciphisa ukuguqulwa kwe-estrogen kwaye ugweme i-gyno kunye nezinye iziphumo ezichaphazelekayo ze-estrogen. Le miphumo ingancitshiswa okanye ikhuselwe ngokupheleleyo kunye ne-supplementary maintenance supplement.
8. Ingakanani i-4-DHEA iguqulwa kwi testosterone?
Lo ngumbuzo womlingo wonke umntu ofuna ukwazi. Kodwa ngelishwa, impendulo "kuxhomekeke" kwaye oko kuthetha ukuba kuxhomekeke kunene kumntu. Ukuba banamazinga aphezulu aromatase aphezulu ke unokufumana i-estradiol. Ukuba kukho ezininzi ze-enzyme ze-HSD, unokufumana inqwaba enkulu kwi testosterone. Kuxhomekeka ngokuqinisekileyo kumntu, kodwa ezinye izifundo zibonise ukuguqulwa kwe-30% kunye neprohormones - ebalulekileyo.
Ekubeni iguqulwa ibe ngamacandelo amaninzi emzimbeni, indlela efanelekileyo yokusebenzisa i-4-DHEA (571-44-8) injenge-cofactor encinci kumjikelezo wakho. I-4-DHEA akufanele ibe yiprohormone eyintloko kwindawo yakho. Eyona nto isetyenziswe ngokubambisana namanye ama-prohormones afana ne-1-DHEA kwi-2: 1 okanye i-3: Umlinganiselo we-1 (kuxhomekeke kumhlobo wakho womzimba - i-ectomorphs kufuneka isebenzise i-2: 1, ngelixa i-endomorphs ifanele isebenzise i-3: 1).
9. Uluphi Uhluko phakathi kwe-DHEA ne-4-DHEA
Uluphi Uhluko phakathi kwe-DHEA ne-4-DHEA
igama DHEA 4-DHEA
Impembelelo eziphambili Ukuguga (amandla omtsha)
-Inkqubo yomzimba Ubungakanani obuninzi (ukugcinwa kwe-nitrogen)
-Umqulu wamagama (i-hematopoietic)
IMetabolite yaseprayimari 5-androstenediol (5-AD) 4-androstenediol (4-AD)
inkcazelo I-DHEA ithathwa ngokuba yi "generic" okanye i-DHEA rhoqo. Iyakwazi ngokubizwa ngokuba yi-5-DHEA, ekubeni ukubophelela kabini kufumaneka kwi-5th isikhundla.
I-DHEA ithandwayo kwisihlwele sokwandisa ubomi ukususela kwi-1980. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukukwazi ukuxhasa amandla kunye nokuphila ngokubanzi kwi-dose ye-50-100mg / imini. (1-3) Ngoku kutshanje, amayeza aphezulu e-DHEA asetyenziswe ukuphucula umzimba ngenxa ye-DHEA ye-anabolic emnene kunye nemiphumo ye-thermogenic. (1, 4) Oku kwenza i-DHEA ibe yinto ekhethekileyo yokunquma ngexesha lekhalori yokutya okunqongopheleyo, ekubeni iDHEA inezixhobo eziphathekayo zokuhlanjululwa kwemisipha. (1, 17)
I-DHEA iguqula kwi-testosterone ngesantya malunga ne-1%, nangona itshintshe ephezulu kwi-5-androstenediol, apho ifumana khona i-androgenic ne-anabolic. (5-8) Iimpawu ze-DHEA ze-thermogenic zivela kwi-7-oxo-DHEA. (4)
Ngenxa yeempembelelo ze-DHEA ezinomnene kwaye aziqhelanga ngokukhawuleza ilahleko okanye i-acne. Nangona i-DHEA inemiphumo e-estrogenic ehambelana nayo, ayifuni ngokuvelisa i-gyno okanye i-side effects ye-estrogenic. (1-3) Abanye abasebenzisi abasebenzisekayo baye babika uxhala okanye ukulala ngeDHEA, enokuthi ihambelana nomsebenzi we-neurosteroid engqondweni. (3) Nangona kunjalo, esi siphumo sichazwa ngokuthi "amandla okukhuthaza" okuxhamla rhoqo kwi-DHEA.
Ngenxa yeentlobo zeentlobo ze-DHEA kunye neendawo zayo zokulinganisela ze-hormonal zingasetyenziselwa ukusika, okanye ukugcina inzuzo ngexesha lokujikeleza kwesigxina. I-4-DHEA i-DHEA yendalo ngokwemvelo. Isakhiwo sifana ngqo ne-DHEA rhoqo kodwa ukubophelwa kabini kwisithuba se-4th sitshintsha kakhulu imiphumo yayo.
I-4-DHEA iguqulela kwi-4-androstenediol, kunokuba i-5-androstenediol, ikhulise i-aybolic potency ngaphezu kwe-2x ngaphezu kwe-DHEA rhoqo. (6-8, 11) I-4-DHEA ilindeleke ukuba ibe nezinga eliphezulu lokuguqulwa kwi-testosterone xa kuthelekiswa ne-DHEA rhoqo. (6, 7) I-4-DHEA ayinakho ikhalori evuthayo iipropathi ze-thermogenic, ngoko ke inikezela ukugcinwa kwekhalori ephezulu yempembelelo. (4) Ukunyuka kwe-anabolic ukunyuka kunye nokunyanzeliswa kwe-thermogenic action kuya kubangela ukuzuza okubonakalayo kumandla, ukukhula kweethambo kunye nokufumana ubunzima.
I-4-DHEA iya kuba nokuguqulwa kwe-estrogen enobunokuthi ilinganiswe ngokulula kunye ne-non-aromatizing steroid njenge-androsterone okanye i-1-DHEA. Imali epheleleyo iya kufana neyokuqala "4-AD" ivaliwe kwi-2004 Steroid Control Act.
Njengoko ezinye i-DHEA isomers, i-4-DHEA ivela ngokwemvelo kwaye ayiyiyo inetyhefu. (9) Imiphumo emibi efana nolusu lweoli okanye ukunciphisa i-fertility kuthathwa njengobumnene kunye nesikhashana. Impembelelo yecala eliphambili liza kuba kukunciphisa imveliso ye-testosterone yemvelo, eyenza i-PCT iyimfuneko emva komjikelo. I-4-DHEA iyindawo ekhuselekileyo yokwakha imisipha.
Ukuphela kwehle kwi-4-DHEA yindleko zayo eziphezulu ngenxa yeqondo eliphakamileyo elifunekayo ukuba lubone imiphumo ebalulekileyo yokwakha imisipha.
10. I-5 i-Prohormones ephezulu kakhulu
I-4-DHEA (4-Andro) (eyaziwa nangokuthi i-4-Androsterone - 3b-hydroxy-androst-4-ene-17-enye) iyisandulela ku-4-Androstenediol kunye ne-1-Androstenedione, eyona isandulela kwithetosterone. Oku kuthetha ukuba ngokusebenzisa inkqubo yokuguqulwa kwamanyathelo amabini, i-4-DHEA iya kuguqula kwi testosterone ngaphakathi komzimba. Kanye nje nge-1-Andro, le prohormone ayinayo i-methylated kwaye ngenxa yoko ayinobuthi onobuthi kwi-isibindi. Nangona kunjalo, yenza i-aromatize kwi-estrogen, ngoko ukusebenzisa i-inhibitor ye-aromatase (AI) kuyimfuneko xa uhamba ngebhayisikili kule ngqungquthela.
I-dose efanelekileyo ye-4-DHEA yayiza kuba yi-300-750mgs ngosuku ngokuxhomekeke kumava ngamnye ngamachiza okuphucula ukusebenza (i-PEDs). Ngokubhekiselele kwimizuzu yexesha eliphakanyisiweyo, umsebenzisi uza kuwuqhuba kwiiveki ze-6-8. Njengoko kuchaziwe ngasentla, kufuneka usebenzise i-aromatase inhibitor ukuvimba isrogen ngexesha lomjikelezo, kunye nento yokugcina uxinzelelo lwegazi kumazinga aqhelekileyo. Emva kokusebenzisa i-4-Andro, kuya kufuneka. Oku kufuneka kuquke i-clomid kwi-25mg ngosuku, i-nolvadex kwi-20mg ngosuku, kunye ne-booster testosterone ekhuthaza iiveki ze-4.
I-1-Andro (eyaziwa nangokuthi i-Androsterone-3b-hydroxy-androst-1-ene-17-enye) i-hormone engapheliyo kunye ne-androgen engenamandla kunye ne-1 / 7th ye-testosterone. Emva kokufakwa emzimbeni, iguqula kwi-1-Testosterone. Ekubeni eli qela aliguquli kwi-estrogen okanye i-DHT, ayikwazi ukuba nayiphi na imiphumo ye-estrogenic, njenge-gynecomastia okanye ukugcinwa kwamanzi. Ukongezelela, i-1-Andro ayinayo i-methylated, ngoko kufuneka kube ncinane okanye kungekho netyhefu yesibindi kunoko konke, ukwenza isibindi sisetyenzise izongezelelo ezingadingekile. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba iziphumo zomsebenzi wegazi zibonise i-enzyme yesibindi ephakanyisiwe.
I-5-DHEA (igama leekhemikhali: i-5-DHEA - 3b-hydroxy-androst-5-ene-17-enye) ihomoni eyenziwa ngokwemvelo ngeentlobo ze-adrenal emzimbeni womntu (ngokuthe ngqo kufuphi neentso, isibindi, kunye iimvavanyo kumadoda). Njengoko usenokuba uyayazi, i-DHEA isebenza njengesandulela kwi-hormone yesini kunye nowesifazana (i-androgens kunye ne-estrogens), kwaye isebenza ngokuguqula kwi-Androstenedione, eguqulelwa ibe yi-testosterone.
I-Epi-Andro (eyaziwa nangokuthi: 3b-hydroxy-androstane-17-enye) iveliswa ngokwemvelo emzimbeni yi-5a-reductase enzyme. Le enzyme ingabonakali kakhulu kwabanye abantu, ngoko imveliso yemvelo iyahlukahluka kumntu kumntu. Xa uthathwa ngomlomo, u-Epi-Andro uguqula kwi-dihydrotestosterone (i-DHT), eyimizuzu ye-5 njenge-androgenic njenge testosterone, okwenza le ngqungquthela iphumelele ekunyuseni ubunzima bomzimba obunzima, ubunzima be-muscle, amandla kunye nobudlova. Njengokuba kunjalo, abanye abasebenzisi baye bafumana ukunyuka kwamaxabiso enkunkuma ngelixa basebenzisa le prohormone. Ekubeni le ngqungquthela "inomileyo" (akukho guqulwa kwe-estrogen), isetyenziswa xa ifuna ukufumana amandla kunye nobukhulu obunzima ngaphandle kokufumana ukugcinwa kwamanzi.
Le prohormone ethile iyingqayizivele kuba ayikho nakwiimakethi. Njengoko igama layo libonisa, i-1,4-DHEA (eyaziwa nangokuthi: 1,4-DHEA - 3b-hydroxy-androsta-1,4-diene-17-enye) inguqulelo entsha ye-DHEA ye-Boldione prohormone yakudala eyavalwa kwi-2012. Izibonelelo ezibini ezilindelekileyo zalo mveliso ziyakhuthaza ukutya kunye nokulungiswa ngokuhlangeneyo.
11. 4-DHEA (571-44-8) Ukuthengiswa
Abantu abaninzi bafuna ukwazi ngomjikelezo ogqibeleleyo kunye neprohormone epheleleyo kuba kukho inkcazelo engafanelekanga malunga neprogrammone ngayinye esetyenziswayo kwaye kutheni kufuneka ithathwe ngendlela ethile.
Xa ufuna ukunyusa amandla kunye nempilo ye-muscle, iprohormones i-4-DHEA yindlela enye yokuzuza kwi-optimal health and muscle performance. I-4-DHEA iyiprohormone ekhuthaza ukugcinwa kwe-nitrogen, amandla kunye nomthamo wegazi ukuhamba kwi-muscle. Ukongeza i-4-DHEA kwinkqubo yokuqeqesha amandla kunye nokwakha umzimba kunye neziphumo ezimangalisayo kunye nemiphumo emibini.
I-4-DHEA isigxina sobomi mfutshane, ungayifaka kunye nayo nayiphi nayiphi i-compound okanye i-anabolic engokwemvelo ngaphandle kokuxhalaba malunga nayiphi na imiphumo engafunekiyo, kodwa ixhomekeke kakhulu kwi-1-Andro kunye no-Epi-Andro (i-compounds eyomileyo) njengoko oku kwenza umsebenzi omuhle ekunciphiseni okanye ukuphepha ukugcinwa kwamanzi.
Akunzima ukufumana i-4-DHEA ekuthengiseni i-intanethi, i-AASraw (www.aasraw.com) inikezela ngemveliso yechungechunge yeprohormone, ixabiso elifanelekileyo, intengo yokukhuphisana, inkonzo yokukhusela nokukhusela ngokukhawuleza.
tags: 4-DHEA powder, bathenge i-4-DHEA powder
Ubuninzi beDoogestrel Ukuthengiswa: IziPhononongo kunye neNqanaba kunye nemiphumo Isingeniso esona sichaphazelekayo seMestallate acetate powder